Cap Vagadziri | China Cap Vatengesi & Fekitori
Zita 2817 Aluminium Bhodhoro Cap Chinyorwa Aluminium 8011 H14 H16 H18 Liner Sarudzo Pe liner, Tinfoil Liner, Saran Liner nezvimwewo Kushongedza Pamusoro: lithographic kudhinda, embossing uye yekugaya, UV kudhinda, kupisa kutsika, sirika yekudhinda screen Padivi: mazhinji mavara offset kudhinda, embossing uye azvikuya, UV kudhinda, kupisa kutsika, slik skrini yekudhinda Kurongedza maererano nezvinodiwa nevatengi. mienzaniso Kupa hongu, apo tichiisa odha, isu tinodzokera kumutengi sampuro mutengo. Sam ...
Zita Aluminium Bhodhoro Cap Chinyorwa Aluminium 8011 H14 H16 H18 Liner Option PE liner, Tinfoil Liner, Saran Liner nezvimwewo Kushongedza Pamusoro: lithographic kudhinda, embossing uye yekugaya, UV kudhinda, kupisa kutsika, sirika yekudhinda Screen padivi: mazhinji mavara offset kudhinda, embossing uye kugaya , UV kudhinda, kupisa kutsika, slik skrini yekudhinda Kurongedza zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi. mienzaniso Kupa hongu, apo tichiisa odha, isu tinodzokera kumutengi sampuro mutengo. Zvandakashanda Ar ...
Zita 2817 Aluminium Bhodhoro Cap Chinyorwa Aluminium 8011 H14 H16 H18 Liner Sarudzo Pe liner, Tinfoil Liner, Saran Liner nezvimwewo Kushongedza Pamusoro: lithographic kudhinda, embossing uye yekugaya, UV kudhinda, kupisa kutsika, sirika yekudhinda screen Padivi: mazhinji mavara offset kudhinda, embossing uye azvikuya, UV kudhinda, kupisa kutsika, slik skrini yekudhinda Kurongedza maererano nezvinodiwa nevatengi. mienzaniso Kupa hongu, apo tichiisa odha, isu tinodzokera kumutengi sampuro mutengo. Zvandakashanda Ar ...
3035 3044 Aluminium Bhodhoro Cap
Zita 3035 3044 Aluminium Bhodhoro Cap Chinyorwa Aluminium 8011 H14 H16 H18 Liner Option Pe liner, Tinfoil Liner, Saran Liner nezvimwewo Kushongedza Pamusoro: lithographic kudhinda, embossing nekugaya, UV kudhinda, kupisa kutsika, sirika yekudhinda screen Side: mazhinji mavara offset kudhinda, embossing uye milling, UV kudhinda, kupisa kutsika, slik skrini yekudhinda Kurongedza zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi. mienzaniso Kupa hongu, apo tichiisa odha, isu tinodzokera kumutengi sampuro mutengo. Sampl ...
Saizi Yakasiyana Mental Lug Lid
Zita rakasiyana saizi Mental Lug Lid Machira Iron Iron Liner Sarudzo PE liner, Tinfoil Liner, Saran Liner nezvimwewo Kushongedza Pamusoro: Mavara mazhinji UV kudhinda, sirika yekudhinda screen Side: mazhinji mavara offset kudhinda, UV kudhinda, kupisa kutsika kurongedza Kurongedza maererano nemutengi ruzivo rwezvinodiwa. mienzaniso Kupa hongu, apo tichiisa odha, isu tinodzokera kumutengi sampuro mutengo. Samples Kurongwa Kana yangosimbiswa, masampuli anozoendeswa kune mutengi mukati memazuva gumi. Taura: Iyi isimbi ...
Aluminium Screw Bhodhoro Cap
Zita Aluminium Screw Bhodhoro Cap Chinyorwa Aluminium 8011 H14 H16 H18 Liner Sarudzo Pe liner, Tinfoil Liner, Saran Liner nezvimwewo Kushongedza Pamusoro: lithographic kudhinda, embossing uye yekugaya, UV kudhinda, kupisa kutsika, sirika yekudhinda screen Padivi: mazhinji mavara offset kudhinda, embossing uye azvikuya, UV kudhinda, kupisa kutsika, slik skrini yekudhinda Kurongedza maererano nezvinodiwa nevatengi. sampuro Kupa Hungu, tichiri kuisa odha, isu tinodzokera kumutengi sampuro mutengo. Zvandakashanda Ar ...
Mushonga Aluminium Bottle Cap
Zita Mushonga Aluminium Bhodhoro Cap Chinyorwa Aluminium 8011 H14 H16 H18 Liner Option Pe liner, Tinfoil Liner, Saran Liner nezvimwewo Kushongedza Pamusoro: lithographic kudhinda, nekusimbisa, uye yekugaya, UV kudhinda, kupisa kutsika, sirika yekudhinda screen Padivi: mazhinji mavara offset kudhinda, embossing uye azvikuya, UV kudhinda, kupisa kutsika, slik skrini yekudhinda Kurongedza maererano nezvinodiwa nevatengi. mienzaniso Kupa hongu, apo tichiisa odha, isu tinodzokera kumutengi sampuro mutengo. Zvandakashanda ...
28 mm Mhete yekudhonza cap
Zita reichi chigadzirwa 28 mm Mhete yekudhonza cap cap Liner PE liner, Tinfoil Liner, Saran Liner nezvimwewo Material Aluminium chiwanikwa kunze Dia (mm) 27mm Yemukati Dia (min.) (mm) 1.50 ± 0.5 Cap Kukwirira (mm) 6.9mm Zvidimbu paCarton 100000pcs Carton Kurema (KG) 10 Carton Dimension 51 * 33 * 31cm Rudzi rwekudhinda Gadzira mavara Kuisa mapepa epepa kana akajairwa kutumira kunze pallet kurongedza. Taura: Ichi chivharo chealuminium. Ine hukuru hwakasiyana. Iyo inoshandiswa pawaini mabhodhoro egirazi, chinwiwa gla ...
Dhonza mhete korona cap
Chigadzirwa Chigadzirwa Dhonza mhete korona kapu Chinyorwa Metal Cap mhando Crown caps Saizi Rudzi Dhizaini, Frosted, Mabhuku eBraille, silika anodhinda ODM / OEM Anogamuchirwa Kurongedza Samples ane makatoni + furo bhegi, hombe kuraira mapallet, makatoni, mapallet + makatoni Nguva yekuendesa Dhizaini Bhodhoro ne Mazuva manomwe, pasina stock inoda makumi maviri anoshanda mushure mekusimbisa iwo masampuli Zivisa: Ichi chivharo chesimbi simbi, ine hukuru hwakasiyana, inochinjika, inogona kuve yakagadzirirwa dhizaini, nyore kuvhura, iyo ...
Oiri yemafuta omuorivhi
ZITA Oiri reMafuta omuorivhi SIZE 31.5 * 23mm ALUMINUM 8011 TICKNESS 0.22MM LINER Plastic insert CARTON STANDARD EXPORT CARTON SIZE 500 * 320 * 300MM QTY / CTN 1980PCS WEIGHT 18Kg Kurongedza mapepa makatoni kana akajairwa kunze kwenyika pallet kurongedza. Svitsa: Ichi chivharo chealuminium-plastiki, iyo inoshandiswa kuvhara mabhodhoro emafuta emuorivhi. Iyo ine akawanda mashandisiro uye inogona kuve nemalogo akasiyana.
zita Zvisikwa cork Chinyorwa Cork MOQ 10000pcs saizi Tsika saizi Ruvara Yakasarudzika Ruvara Chinyorwa Cork Logo Tsika Kurongedza Outter: katoni bhokisi Carton saizi inogona kugadzirwa Zivisa: Iyo yakapfava uye yakasununguka chimiro checork cork inogona kuvhara muromo webhodhoro zvakanaka pasina kunyatsoparadzanisa mweya. , iyo inobatsira kukurumidza kukura uye kukura kwewaini iri muhombodo, zvichiita kuti waini inakidze zvakanyanya kutenderera uye kutenderera.